के खोज ईन्जिनहरु पढ्छन् ... | Martech Zone
जटिल एल्गोरिदमहरूसँग खोज ईन्जिनहरू सूचक पृष्ठहरू जुन विभिन्न चरको एक टन तौल गर्दछ, दुवै तपाईंको पृष्ठमा आन्तरिक र बाह्य। मलाई लाग्छ कि यो महत्वपूर्ण कुरो तत्वहरू पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण छ जुन खोज ईन्जिनहरूले ध्यान दिएका छन्, यद्यपि। धेरै जसो तत्वहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो साइट योजना वा डिजाईन गर्दा वा तपाईंको पृष्ठ लेख्दा पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। यो एक विशिष्ट मार्केटिंग ब्रोशर वेबसाइट, एक ब्लग, वा कुनै अन्य साइट हो कि पर्दैन।
खोज इञ्जिन अनुकूलनको लागि कुञ्जी तत्वहरू
SEO मान्छे अघि कि मेरो ब्ल्ग पढ्छ मलाई अलग फाल्छ - म त्यहाँ एक अस्वीकरण बाहिर फेंक दिनेछु ... यो केवल एक अंश हो एसईओ विशेषज्ञले ध्यान दिनु के तपाइँको साइट समीक्षा र ट्वीक गर्दा ध्यान दिनुहुन्छ। त्यहाँ अवश्य छन्, अन्य कारकहरू जस्तै मेटा ट्यागहरू, HTML प्लेसमेन्ट, र साइट लोकप्रियता। मेरो पोइन्ट औसत वेबसाइट विकासकर्ता वा व्यवसाय मालिकलाई केहि सजिलै परिमार्जन गर्न सकिने केहि मुख्य तत्वहरू बारे सचेत गराउनु हो।
यो तपाईंको पृष्ठहरूको शीर्षक पृष्ठले कति राम्रोसँग अनुक्रमित गर्छ भन्नेमा प्रभाव पार्छ। तपाइँको पृष्ठ शीर्षकमा कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग गर्न र तपाइँको ब्लग वा साइटको शीर्षक माध्यमिकमा राख्न निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको डोमेन नाम तपाईंको प्लेसमेन्टलाई असर गर्दछ। यदि तपाइँ विशिष्ट कुञ्जी शब्द वा वाक्यांशहरूको लागि शीर्ष स्थान चाहानुहुन्छ भने, त्यसलाई तपाइँको डोमेन नाममा समावेश गर्ने बारे सोच्नुहोस्।
पोस्ट स्लगहरू महत्त्वपूर्ण छन् र कुञ्जीशब्दहरू र वाक्यांशहरू उठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। म एक सम्मोहक हेडलाईन प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छु जसले पाठकलाई आकर्षित गर्दछ तर मेरो पोस्ट स्लगहरू प्राय: खोज इन्जिनहरूको लागि परिमार्जन गरिन्छ।
यो मुख्य शीर्षक (h1) तपाईको पृष्ठको भारी तौल बिन्दु भित्र पर्छ जुन खोज इन्जिन अनुक्रमणिका छन्। Hight (est) प्लेसमेन्ट शारीरिक रूप बाट HTML मा पनि अनुक्रमणिकालाई असर पार्दछ।
मुख्य हेडिंगसँगै,aउपशीर्षक (h2) ले पृष्ठको अनुक्रमणिकामा पनि असर पार्नेछ।
यो तपाईंको पोष्टको शीर्षक, वा अतिरिक्त उपशीर्षकले कुन कुञ्जी शव्दहरू र वाक्यांशहरूलाई अनुक्रमित गरिन्छ र कति राम्रोसँग प्रभाव पार्छ।
दोहोर्याउँदै कुञ्जी शब्द र मुख्य वाक्यांशहरू सामग्री भित्र महत्त्वपूर्ण छ। यी कुञ्जी शब्द र कुञ्जी वाक्यांशहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ यदि ती खोजशब्दहरू र कुञ्जी वाक्यांशहरू हुन् कि सम्भवतः खोजिएको छ भने।
मानार्थ खोजशब्दहरू र मुख्य वाक्यांशहरूले पनि मद्दत गर्दछ।
थप उपशीर्षक (h3) ले पनि मद्दत गर्दछ र पृष्ठ सामग्री भित्र अन्य शब्दहरू भन्दा बढी तौल गर्न सक्छन्।
एक भित्र वाक्यांश र कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग गर्दै एch्कर ट्याग (लिंक), कुञ्जीशब्द ड्राइभ गर्ने र पृष्ठमा कीफ्रेज अनुक्रमणिका पनि उत्तम तरिका हो। यस बहुमूल्य वस्तुलाई "यहाँ क्लिक गर्नुहोस्" वा "लिंक" मा व्यर्थ नराख्नुहोस् ... बरु शीर्षक र पाठको प्रयोग गरेर लि and्क र कुञ्जी वाक्यांशहरू बीचको सम्बन्धलाई वास्तवमा ड्राइभ गर्न। उदाहरण को लागी, यदि म मार्केटिंग र टेक्नोलोजी संग मेरो डोमेन चाहान्छु, म प्रयोग गर्न निश्चित हुन चाहान्छु।
एन्कर लिंकको साथ, छवि लि into्कहरूमा शीर्षक ट्यागहरू समाहित गर्न पनि सहयोगी हुन्छ। खोज ईन्जिनले छविको सामग्रीलाई अनुक्रमणिका गर्न सक्दैन (अझै), एक कुञ्जी शब्दले भरिएको शीर्षक थप्दा धेरै बढी मद्दत गर्दछ - विशेष गरी यदि कसैले सजिलै प्रयोग गरिरहेको छ भने। गुगलको छवि खोजी.
छवि नामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। निश्चित गर्नुहोस् ड्यासहरू प्रयोग गर्नुहोस् र छविमा शब्दहरू बिचमा अन्डरस्कोरहरू होइन। र निश्चित गर्नुहोस् कि छवि नामले छविसँग मेल खान्छ ... प्रासंगिक नभएको छविमा कुञ्जी शब्दहरू राख्ने प्रयास गर्दा सहयोग गर्नु भन्दा बढी चोट पुग्न सक्छ।
टैग: एch्कर ट्यागएch्कर ट्याग पाठलंगर पाठडोमेन नामh1 ट्यागh2 ट्यागh3 ट्यागशीर्षकहरूछविछवि नाममुख्य वाक्यांशहरूकुञ्जी शब्द प्रयोगकिवर्डपृष्ठ शीर्षकपोस्ट स्लगहरूपोष्ट शीर्षकउपशीर्षकपृष्ठको शीर्षक
यदि तपाईंले गलत कुञ्जी वाक्यांशहरू सुरु गर्नको लागि लक्षित गर्नुभएको छ भने, यो वास्तवमै फरक पर्दैन, मलाई लाग्छ तपाईंले यसको धेरैजसो पाउनुभयो।
धेरै गहिरो काम।
समातियो! मैले चयन गरेको कुञ्जी शब्दहरू कडा रूपमा भिजुअल, एसईओका लागि थिए!
एसईओ जान्नु र यसलाई सामान्य व्यक्तिको सर्तमा व्याख्या गर्नु दुई फरक जनावरहरू हुन्। मैले सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस्, जब मैले खोज इन्जिनहरू के खोज्छन्, लिंकिङ कसरी महत्त्वपूर्ण छ, र पृष्ठ शीर्षकहरू किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर व्याख्या गर्न सक्दो प्रयास गर्दा म केही अचम्मित देखिन्छु। ती विचारहरूलाई संक्षिप्त, बुझ्न सजिलो तरिकामा व्यक्त गर्नु मेरो काम हो। यो पोस्टले मलाई धेरै मद्दत गर्छ। राम्रो काम।
धन्यवाद, डेन! यो मेरो लागि एक बल भएको छ र म यसलाई राम्रो-ट्यून गर्ने प्रयास जारी राख्छु। मलाई लाग्छ कि म व्यक्तिगत रूपमा राम्रो छु, प्राय जसो किनभने मैले बोल्ने मानिसहरूको भ्रमित रूप अनुवाद गर्न सक्छु।